Facetime For Mac - Ampidino ny instetime ho an'ny Mac eo noho eo
Aprily 17, 2002 ny Facetime Guide Leave a Comment
Face Time dia mahagaga fampiharana namorona ny Apple Inc.. Ity lahatsary vokatra telephony efa ridiculously nanao azy mora kokoa hatao mifandray amin'ny hafa amin'ny alalan'ny fanaovana lahatsary na feo antso. Zavatra tsy mampino Face Time fampiharana dia voakambana amin'ny fitaovana rehetra manohana IOS, ary koa ao amin'ny solosaina Macintosh amin'ny Mac OS X 10.6.6 ary taty aoriana.
facetime for MAC maimaim-poana Download
facetime fampiharana for MAC
facetime maimaim-poana ho an'ny mac
Download facetime for MAC maimaim-poana
facetime maimaim-poana Download for MAC
maimaim-poana ho an'ny mac facetime Download
Ity fampiharana nivoatra tamin'ny voalohany ho an'ny iPhone 4 mpampiasa fa ankehitriny noho ny laza haingana, dia lasa naorina-in endri-javatra rehetra anisan'izany ny fitaovana Apple iPhones, iPad, Mac, ary iPod mikasika. Fifandraisana dia anisan'ny amin'izao fotoana izao ny fiainana sy ny ankehitriny ianao dia afaka mampiasa Face conveniently Time amin'ny mac tsy hiala amin'ny hifandray manokana ny raharaham-barotra sy ny fiainana.
Ao amin'ny Mac, mila anao fotsiny ny fifandraisana Internet na finday tahirin-kevitra ary avy eo dia afaka mora foana miresaka ny mpifandray amin'ny iray monja tsindry. Ity fampiharana ny Face mifaninana Time nanao izany azo atao ny miresaka amin'ny fianakaviany na ny namany raha mbola ianao sendra nanao dia, Afaka mijanona mifandray amin'ny mpiasa, afaka manome famelabelarana, miresaka ny mpanjifa sy ny lisitra mitohy.
Izany no fara-tampony, famoronana, mazava, intuitive sy ny fomba mety hanaovana-peo lahatsary na antso, ary mifandray foana amin'ny fifandraisana amin'izao tontolo izao ny Apple fitaovana. Ity lahatsoratra ity dia hanampy anao hahatakatra ny fototra misintona endri-javatra, fampiasana sy ny singa hafa ny Face fotoana ho an'ny Mac.
2 Dingana mba hametraka Face Time By Mac Apple fivarotana:
2.1 Manan-danja Components for Face Time amin'ny Mac:
3 Ahoana no mba hanangana FaceTime amin'ny Mac:
3.1 Face Time Notification & Endri-javatra amin'ny Mac:
3.2 Fampahafantarana toe-javatra in Face Time:
Fa fampiasana Face Time amin'ny Mac, fa resaka fotsiny vitsy kitika. Face Time dia inbuilt rindrambaiko ao amin'ny mac. Rehetra dikan-Mac farany efa efa mialoha nametraka Face Time.
Rehetra tsy maintsy atao fotsiny hametraka ny iPhone sy ny Apple isa mailaka ID ary afaka hankafy ny iray amin'ireo faran'izay tsara indrindra lahatsary telephony fitaovana eo amin'ny mac. Afaka manampy fifandraisana mora foana ny hafa mpampiasa mampiasa fitaovana ao anatin'izany Apple Mac, iPhones, iPad, iPod, sns. Azonao atao ny mampiasa ny Apple Id mailaka toy ny mpiantso ID mba hifandray mpampiasa hafa eto amin'izao tontolo izao ny Apple.
Raha tsy manana in-manaova fotoana Face rindrambaiko ao amin'ny mac, dia afaka misintona fotsiny izany amin'ny alalan'ny fitsidihana ny Mac App Store. Fa mampiasa ny Mac App Store, tsy maintsy manana, fara fahakeliny, Mac OS X 10.6 na avo kokoa. Azonao atao na ny mahazo ny Mac App Store ao amin'ny biraonao, na amin'izay hahitanareo any mialoha nametraka App Store.
Dingana mba hametraka Face Time By Mac Apple fivarotana:
Jereo Face ny APt amin'ny alalan'ny fanoratana Face fotoana tany amin'ny bara ny in-manaova Apple Mac tsindrio fivarotana na mivantana ETO.
Tsindrio eo amin'ny bokotra Buy mba afaka mividy Face Time fampiharana ho an'ny Mac.
Ampidiro ny Apple ID noho ny mividy izany rindrambaiko
Ny vola lany amin'ny fametrahana Face Time fampiharana fotsiny ho an'ny $0.99
Zava-dehibe ny mahatakatra, fa ny Face Time no mametraka amin'ny Mac App Store dia be taona dika. Ny dikan-Face farany Time tsy ampy amin'ny Mac OS X 10.6 na avo kokoa. Ny nanolorana azy ho télécharger Face Time ihany Raha mampiasa be taona dikan-Mac.
Rehefa avy nametraka na mahazo Face Time rindrambaiko ao amin'ny Mac, dia afaka manao horonantsary na voafetra peo antso rehetra ny olona mampiasa fitaovana Apple.
Manan-danja Components for Face Time amin'ny Mac:
Na tsy maintsy manana Mac amin'ny Mac OS, na manana Mac OS X 10.6 na avo kokoa.
Ny fifandraisana izay tianao hampiasaina ho an'ny antso peo lahatsary na dia tsy maintsy manana fitaovana I Apple, na tsy maintsy mampiasa Mac.
Mahaliana, dia afaka ihany koa ny mankafy Face Time peo ao amin'ny Mac ny mpampiasa mampiasa Apple Watch.
Ho azo antoka ny hanana mety sy fifadian-kanina fifandraisana aterineto mba afaka mahazo toetra tanteraka lahatsary na feo antso tsy misy fitsaharana.
Tsy maintsy manao ny Apple ID mba hanomboka hampiasa fampiharana ity.
Ahoana no mba hanangana FaceTime amin'ny Mac:
Mila manaraka ny dingana eto ambany mba hanomboka mifandray amin'ny alalan'ny Face Time amin'ny mpampiasa hafa.
Voalohany, hanomboka ny Face Time rindrankajy amin'ny Mac. Azonao atao ny manao izany amin'ny alalan'ny fampiasana na ny mialoha nametraka rindrankajy amin'ny Mac na amin'ny alalan'ny fametrahana Face Time from Mac App Store
Ampidiro ny amin'izao fotoana izao Apple ID ary raha tsy manana ny ID, ianao dia afaka mamorona iray.
Fenoy ny fanamarinana dingana
Afaka manamarina ny vaovao amin'ny alalan'ny na mahazo rohy eo amin'ny adiresy mailaka na dia afaka mahazo fanamarinana fehezan-dalàna amin'ny nomeraon-telefaona.
Taorian'ny fanamarinana dingana, ianao dia tsy maintsy hametraka finday isa ary mailaka ID hafa ny fifandraisana mba manomboka manao ny voalohany Face Time antso.
Ny rindrambaiko hanontany ny safidiny hanaovana feo na lahatsary antso. Afaka mifidy izay tianao hatao mifandray amin'ny hafa mpampiasa.
Ataovy ny vaovao ny mpampiasa hafa anisan'izany ny e-mail, anarana na ny laharana an-tariby. Afaka manao izany amin'ny alalan'ny nidirany ity vaovao momba ny fikarohana toeram.
ary Farany, tap ny telefaonina na ny fakan-tsary mba hanao antso toetra miaraka amin'ny manam-paharoa fampiharana ny Face Time.
Face Time Notification & Endri-javatra amin'ny Mac:
Raha te-hatao mifandray amin'ny hafa mpampiasa Apple, na raha toa ianao ka hahazo ny antso ary tsy takatry ny saina ny I Phone na I pad, dia afaka mampiasa ny Mac haingana mba hanatrika ny antso.
Ary, raha eo afovoan'ny ny antso sy ny te-hanova na dia hifindra toerana ny totozy, ary tsindrio ny safidy na dia iray akory
Azonao atao ny moana Mika na Unmute izany
Afaka miala ny lahatsary ao amin'ny sy eny arakaraka ny safidinao
Afaka hanova haben ny efijery mba hijery ny sary mazava kokoa
Afaka hifarana ny antso isaky tianao
Raha toa ka, te-hanova izay nametrahany Face Time amin'ny Mac, dia afaka manao izany amin'ny alalan'ny conveniently mankany Apple sakafo ary avy eo vao rafitra tiany ary avy eo vao fampahatsiahivana. Dia hahazo varavarankely misokatra toy ny ambany:
Fampahafantarana toe-javatra in Face Time:
Afaka miala mora foana na eny amin'ny endri-javatra rehetra izay tianao. Azonao atao ny manova ny feon'ny fampahatsiahivana, App sary masina, fampahafantarana fanavaozam-baovao ary ny maro hafa
Endri-javatra mahavariana iray hafa dia, dia afaka manao vondrona miantso amin'ny alalan'ny vondrona Face fotoana feo na lahatsary antso. Hatramin'ny 32 ny fifandraisana dia azo ampiasaina ho an'ny vondrona antso. Izany no tena manampy ho an'ny mpiasa, fikambanana, sy ny marika. Izany fitaovana manampy azy ireo hifandray mpiasa sy ny mpanjifa avy amin'ny manerana izao tontolo izao amin'ny iray monja tsindry.
Ny lahatsoratra eto no antsipirihany fanazavana mba hanorina sy hampiasa face fotoana MAC. Manantena aho fa ny lahatsoratra no ahalalan-ho anao sy ianao ilaina angona avy nahazo io lahatsoratra io. Raha toa ka manana fanontaniana, zarao ao anaty boaty fanamarihana etsy ambany ary zarao amin'ny namanao sy havanao.